Emulators Top 10 NES - Play NES Games on Qalabka kale
Hordhac Si NES:
Nidaamka madadaalada Nintendo waa Console ah ciyaarta video 8 xoogaa soo saaray by Nintendo. Waxaa la sii daayay oo ka dhacay Jabaan 1985, NES ayaa loo arkaa in Console ugu fiican ciyaaraha ee xiligeedu, Console gacan ka nooleeyo warshadaha ciyaaraha ka, Iyadoo NES, Nintendo soo bandhigay model ah oo hadda heerka ganacsi ee Oggolaanshaha horumarinta dhinac saddexaad, iyaga oggolaanaya in la soo saaro oo la qaybiyo horyaal u Nintendo ee madal. Ka dib markii shil ciyaarta video ee '83 ah, dukaano badan oo saarayaasha elektaroonik ah suuqa guriga video ciyaarta tagay dhintay, laakiin shirkad Japanese loo yaqaan Nintendo arkay fursad oo ka faa'ideystay waxaa ka mid ah. In kasta oo ay caan u weyn, nidaamka NES la si weyn loo yaqaan ahaan inay u nugul cillad. Kulan Dirty si fudud u sadhayn yaabaa nidaamka, taasoo keentay in ay diidaan in ay ku shuban.
Gaadhi size Min / Max: 192 Kbit - 4 Mbit
Xoogna dhawaaqa PSG, 5 channels
Xawaaraha processor: 1,79 MHz
Qaraarka: 256x224 (ntsc) ama 256x239 (kumuunayaasha)
Colors laga heli karaa: 52
Max Colors shaashadda: 16, 24 ama 25.
Sprites Max per line: 8
Sprite size: 8x8 ama 8x16
2 la ruxruxo square
Sababta Gameboy nahay
Maanta waxaan heysanaa badan qalabka Console sare aan ku raaxaysan karaan, dadka qaarkood ayaa weli jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro Nintendo horumariyo kulan ee nidaamka, si horumarinta la shaqeeyay tan sano oo isku dayaya in ay ku daydaan nidaamyada Nintendo gal ah qalab cusub oo horumarsan.
Taageerayaan Operating Systems beegti iyo xaasidnimo Wixii Gameboy:
Khayaadka oo ka shaqeeya by dhaqanka wanaagsan iyo tarbiyadda ah ee processor iyo qaybaha shaqsi. Waxaad dhiso gabal kasta oo gaar ah oo ku saabsan nidaamka ka dibna xirmaan xubnihii badan sida fiilooyin sameeyo hardware
Fikradda ka dambeysa FCEUX waa in ay ku milmaan xubno ka FCE Ultra, rerecording FCEU, FCEUXD, FCEUXDSP, iyo FCEU-mm galay laanta hal FCEU. Waxaad awoodi doontaa inay ku ciyaaraan oo dhan oo ka mid ah Classics NES jecel la mid aad u yar marka laga reebo, FCEUX bixisaa dega Khayaadka oo sax ah. FCEUX waa cross madal, NTSC iyo Pal Famicom / NES emulator in uu yahay horumar ah FCE emulator asalka Ultra. FCEUX waa Waasac emulator FCEU ah in siinayaa sida ugu fiican ee Caalamka ciyaaryahanka guud iyo bulshada ROM-jabsiga ah.
Pad gacanta Configurable.
Taageerada gamepads iyo joysticks oo ay la socdaan keyboard
Taageero Multiple nidaamka qalliinka
Kulan Ganacsiga waxaa taageera
Aad u fududahay in Mudanayaasha iyo culayska ROMS.
Naqshadeynta sare Ultra dhawaaqa weyn
Ciyaari karaa inta badan kulan NES
Taageero madal Multiple.
JNES waa emulator NES ah ee daaqadaha iyo nidaamyada android ku salaysan, awoodaha xaasidnimo waa hab ka baxsan badan emulators kale ee suuqa, JNES ku faantaa ah interface user dareen la dagdag ah ka badbaadiyay iyo duubo filim samaynta ciyaaro NES dheeraad ah oo xiiso leh. Mid ka mid ah qaababka coolest waa database waxaa ka mid ahaa ee Pro-Action-celiska ah iyo Game Converter qiyaanoole, edeb ee Gent. Emulator Tan waxaa ka mid awood u leh inay u simbiriirixan dhexeeya shaashad buuxda iyo hababka windowed, record video iyo Screenshot, iyo xataa macmiil play net.
Game Converter iyo taageero Pro celis Action, screen Full iyo hab Windowed, qabashada Screen (Bitmap), wax soo saarka audio Record
Save oo ku shuban NES gobolka ka file (11 naadi)
Aqbasho Configurable, garaafka soo saarka Sound, Rom browser
Ragcaayo Real-time ah ROMS isticmaalaya qaab IPS ee
Loading ZIP file
Emulator aad u deggan oo leh qaab filaayo.
Ciyaaraa inta badan kulan ganacsi.
Video lagu duubo iyo shaashadda taageeray.
Nestopia waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee emulators Nintendo / Famicom. Waa la il emulator furan oo joogto ah uu updated. Dekedda Windows ayaa qori ka xoq in ka dhigan tahay in la soo hagaagtay. Emulator Tani waa in play net waa la taageeraa network Kaillera ah. Xusuusan yar ka hor inta aanad bilaabin ciyaaro kulan play net, liiska waafaqsan weyn oo qofka xukuma uu yahay oo kaliya madadaalo u ciyaaro kulan aad jeceshahay la.
Taageerada 201 fayl kala duwan.
Famicom System digsi (FDS) xaasidnimo.
Taageerada Light Zapper ku Gun.
Taageerada shanta ugu badan chips dhawaaqa dheeraad ah.
Emulator Xasilloon qaab filaayo.
Taageero khiyaameeyaan karti
Taageerada duubo iyo Screenshot.
Pay hab Net taageeray.
Xallinta screen Full taageerayaan.
Dhufto ee Multiple taageeray
Emulator waxaa la qoray C ++ luqadda, waxa uu ahaa mid aad sax u emulator NES. PPU ayaa lagu qori in ka badan sax ahayn ka hor inta noqon, ordaya wareeg-by-wareeg sida ay waraaqo la sii daayay markii la. Ka dib markii in, processor la qori in ay si sax ah u fuliyaan tilmaamaha. Markaas APU la inta badan dhameystiray, dhawaaqaan emulator habboon ee. Meel ay weheliyaan khadka, la goostay diinta C ++ ee code la mid aad u liidata sameeyo. Ujeedada ugu danbeyn ka mid ah Nintendulator waa in ay noqdaan * emulator NES * ugu sax ah, waxay xaq u soo degin inuu soo quirks hardware ah. In Dhanka kale, waxaa hubaal ah in la isticmaali karaa si ay u tijaabiso code NES kalsooni leh in haddii ay u shaqayso si sax ah in Nintendulator, waxa ay u badan tahay in si sax ah oo ku saabsan hardware dhabta ah iyo sidoo kale ka shaqeyn doonaan.
Khayaadka oo sax ah
Taageerada kulan badan
Taageerada kulan badan.
Badan oo kutaan mararka bidbidayaan.
Top 10 emulators GBA - ciyaaro kulan Game Boy Advance on aaladaha kale ee
> Resource > Emulator > Top 10 NES Emulators - Play NES Games on Qalabka kale